अनुप्रयोगहरू अद्यावधिक गर्ने बेला प्ले स्टोरले सूचनाहरू देखाउन रोक्दछ Androidsis
त्यहाँ मानिसहरु छन् जो उसलाई सूचनाहरू मनपर्‍यो, र जब पनि अनुप्रयोग वा खेल तिनीहरूलाई विकल्प दिन्छ, तिनीहरू तिनीहरूलाई सक्रिय। म विशेष गरी ती मध्ये एक होइन, किनकि उनीहरूले हरेक चोटि म मेरो मोबाइल जाँच्दा धेरै समय बर्बाद गर्दछन्। भाग्यवस, यस्तो देखिन्छ कि म केवल अनौंठो होइन।
पछिल्लो डिसेम्बर, प्ले स्टोरलाई १ 17.4..XNUMX संस्करणमा अद्यावधिक गरेपछि, केही प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको असुविधा व्यक्त गरे जब तिनीहरूले कसरी देखे तिनीहरूले अद्यावधिक गरिएको अनुप्रयोगहरूबाट सूचनाहरू प्राप्त गरिरहेका थिएनन्। यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि यो गल्ती थिएन। गुगल आफैंले एन्ड्रोइड पुलिस माध्यममा यकिन गरेको छ, सूचनाहरु निश्चय पनि हराइसकेका छन्।
गुगलले दावी गर्छ कि सूचनाहरूको अभाव यो अनुप्रयोग वा प्रणाली आफैमा त्रुटि होईन तर यो एक अधिक विशेषता हो। प्ले स्टोरको हालको संस्करण १ number..17.6.19.१ number, संस्करण हो जुन तपाईं यो स्थापना गर्नुभयो भने, यो अब तपाईं अनुप्रयोग अपडेट जानकारी दिनेछ।
Play Store स्वत: अपडेटहरू पेन्डिंग डाउनलोडहरूको लागि प्रत्येक दिन जाँच गर्दछ र तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्दछ यदि हामी स्वचालित अपडेटहरू कन्फिगर गरेका छौं। एक पटक अनुप्रयोग अपडेट प्रक्रिया समाप्त भएपछि, Play Store पठाउँदछ, पठाइन्छ, ए प्रक्रियाका बारे हामीलाई जानकारी गराउन सूचना।
तिनीहरू अद्यावधिक गरिएको छ, राम्रो, यो उत्तम देखिन्छ तर यो जानकारी को लागी उपयोगी छ? कुनै हालतमा हुदैन। यो तर्कसंगत हुनुपर्दछ जुन गुगलले प्रणालीमा तिनीहरुलाई पूर्ण रूपमा हटाउन आएको छ।
एक अनुप्रयोगको डाउनलोड र स्थापनाको अधिसूचना, देखाउन पनि बन्द गरिएको छ। यदि हामीले तपाईंलाई डाउनलोड डाउनलोड र अद्यावधिक स्थापना गर्न दिइसकेका छौं भने, हामी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छौं कि प्रणालीले यसलाई तुरुन्तै गर्दछ, त्यसैले सूचना समाप्त भएपछि पठाउनुको कुनै मतलब छैन।
अद्यावधिक सूचनाहरू हटाउने गुगलको निर्णयको बारेमा तपाईं के सोच्नुहुन्छ? टिप्पणीमा आफ्नो राय छोड्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » प्ले स्टोरले अधिसूचनाहरू देखाउन रोक्नेछ जब तपाईं अनुप्रयोगहरू अपडेट गर्नुहुन्छ
…। यसले बीस संस्करणहरू बनाउँदछ जसले तपाईंलाई एक विकल्प चयन गर्न अनुमति दिन्छ ताकि यसले न त उपलब्धलाई सूचित गर्दछ र न अद्यावधिक संस्करणहरूलाई सूचित गर्दछ। ओह राम्रो।
गुगलले आफ्नो फोन अनुप्रयोगको लागि नेटिभ कल रेकर्डिंग अनुप्रयोगमा काम गर्दछ